Dawlada federaalka oo sheegtay in ay hub ka dhigis ka bilaabi doonto Muqdisho. – Radio Daljir
Dawlada federaalka oo sheegtay in ay hub ka dhigis ka bilaabi doonto Muqdisho.
Muqdisho, Dec 4 – Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Cabdisamad Macallin Maxamuud ayaa sheegay in ay wadaan qorshe baaxad leh oo lagu xakamaynayo ammaanka magaalada caasumadda ah ee Muqdisho.
Wasiirka oo waraysi siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii gacan adag loogu qaban lahaa nabadgalyada magaalada Muqdisho oo haatan badankeeda ay maamusho dawladda federaalku, waxaana uu intaasi ku daray in ay dhinaca kale meeleeyeen nidaamkii shacabka magaalada Muqdisho hubka looga dhigi lahaa.
Md. Cabdisamad, waxaa uu ku celceliyey qorshaha haatan gacanta lagu hayo ee ay waddo dawladda federaalku in ay wax badan ka tari doonto joojinta falalka ammaan-darro ee dilal iyo qaraxyadu ka mid yihiin, kuwaasi oo magaalada Muqdisho ka noqday wax is-daba-joog ah gaar ahaan intii Al-shabaab ay sheegtay dagaalkoodii in uu u xuub-siibtay dhacdooyin ku-dhufo oo ka dhaqaaq ah.